Ethereum Kedu ihe ọ bụ na otu esi azụta ndị ọzọ? Ihe niile gbasara ngọngọ | Akụkọ akụrụngwa
Miguel Gaton | | Ego, Noticias, Technology
Etherum abughi ihe ozo di mfe na Bitcoin n'onwe ya, kama karia bụ ikpo okwu nke na-erite uru na teknụzụ blockchain (nke Bitcoin jikwa) ọ bụghị naanị iji nye usoro ịkwụ ụgwọ ọzọ yiri Bitcoin, Ether, mana ọ bụ ngwanrọ nke mmepe sọftụwia na-enyere aka na okike nke sistemụ cryptocurrency nke na-ekekọrịta otu agbụ, nke amara nke ọma dị ka ngọngọ, ebe a gaghị edezi ma ọ bụ gbanwee ihe ndekọ ndị ahụ abanye.
Mana ọ bụrụ na ihe masịrị gị bụ ịmata Ọ bụrụ na Ethereum bụ ihe ọzọ na Bitcon, azịza ya bụ mba. Ihe ọzọ nke Bitcoin nke Ethereum na-enye anyị ka a na-akpọ Ether, bụ ikpo okwu na-abụghị ọrụ Ethereum nke anyị ga-agwa gị ihe niile dị n'okpuru ka ị mara ka o si arụ ọrụ na otu esi azụta Ethereum.
Ọ bụrụ n'ịchọrọ ịzụta Ethereum ugbu a, nweta $ 10 FREE na nzụta gị site na ịpị ebe a
1 Kedu ihe bụ Ethereum?
2 Kedu ihe bụ Ether?
3 Onye kere Ethereum?
4 Ihe ọzọ na Bitcoin
5 Esi zụta Ethereum?
6 Gịnị bụ ngọngọ?
8 Enwere afụ cryptocurrency?
Dịka m kwuru n'elu, Ethereum bụ oru ngo nke jikọtara ego dijitalụ, Ether, dị ka Bitcoin, mana na-eji ohere ndị blockcheni na-enye anyị, ndekọ na-enweghị ike ịgbanwe agbanwe nakwa na kemgbe a mụrụ Ethereum ka e duziri okike nke smart contracts. Nkwekorita amamịghe, dị ka iwu zuru oke, gụnyere ọrụ ego, ha na-eme ihe n'ụzọ doro anya maka ndị abụọ ahụ yana ọrụ ha yiri koodu mmemme Ọ bụrụ na ha emee nke ahụ. Nke ahụ bụ, ọ bụrụ na nke a emee, ị ga-eme nke a ọzọ ee ma ọ bụ ee.
Nweta $ 10 FREE ịzụta ETH site na ịpị ebe a
Ihe omuma a nile gosiputara na ngọngọ, ihe ndekọ a na-apụghị ịgbagha agbagha ebe arụmọrụ niile gosipụtara, ma ọ bụ maka ọrịre ma ọ bụ zụta mkpụrụ ego, nkwekọrịta smart ... Ihe ọmụma echekwara na ngọngọ nke ikpo okwu nwere ike ịnweta onye ọ bụla ma dị na kọmputa niile mejupụtara netwọk Ethereum. Ọrụ nke Bitcoins blockchain bụ ihe dịka ya, mana ọ bụ naanị data azụmahịa ka edere n'ime ya, ebe ọ bụ na agbatịbeghị ohere nke teknụzụ a.
Kedu ihe bụ Ether?
Nzuzo Ethereum abughi ego n'onwe ya. Na Ether bụ ego nke ikpo okwu Ethereum, na nke anyị nwere ike iji kwụọ ndị mmadụ ụgwọ maka ihe ma ọ bụ ọrụ. Ether bụ ihe ọzọ nke mkpuchi dị na ahịa nke ebuputere ịsọ mpi na Bitcoins, mana n'adịghị ka nke abụọ, Ether gụnyere n'ime ikpo okwu nke na-eji ohere zuru oke nke blockchains, nke a maara nke ọma dị ka blockchain.
Ether, dị ka Bitcoin ọ dịghị òtù ego ọ bụla na-achịkwa ya, yabụ uru ma ọ bụ ọnụahịa ya enweghị njikọ na ebuka, ezigbo ala ma ọ bụ ego. A na-ekpebi uru Ether n'ahịa a na-emepe emepe dịka ọrụ nzụta na ire ere nke dị n'oge ahụ, ya mere ọnụahịa ya ga-agbanwe n'oge.
Ị chọrọ 10 $ n'efu mgbe ịzụrụ EtH gị? Ọfọn pịa ebe a
Ezie na ọnụ ọgụgụ nke Bitcoins ejedebeghị 21 nde, Ether anaghị ejedebe, yabụ ọnụahịa ya dị oge 10 dị ala karịa Bitcoins. N'oge ire ere tupu emee Ethereum, e kere nde 72 Ether maka ndị ọrụ niile nyere onyinye site na Kickstarter platform na oru ahụ na ntọala Ethereum, nke, dị ka anyị ga-ahụ, na-enye anyị ihe ndị ọzọ dị mkpa karịa ọrụ ma baa uru. N'okpuru usoro etinyere n'oge ire ere na 2014, ntinye ether dị nanị na 18 nde kwa afọ.
You chọrọ itinye ego na Ethereum?
Pịa Ebe a ịzụta Ether
Onye kere Ethereum?
N'adịghị ka Bitcoins, onye okike nke Ethereum nwere aha mbụ na aha ikpeazụ ma ghara zoo. Vitalik Buterin malitere mmepe Ethereum na mbubreyo 2014. Iji kwado mmepe nke ọrụ ahụ, Vitalik chọrọ ego ọha na eze, na-ewelite ihe karịrị 18 nde dollar. Tupu ya elekwasị anya na ọrụ Ethereum, Vitalik na-ede ihe na blọọgụ dị iche iche banyere Bitcoins, ọ bụ mgbe ahụ ka ọ malitere ịmalite nhọrọ nke teknụzụ nke na-eji Bitcoin nwere ike ịnye ya na ruo oge ahụ furu efu.
Ihe ọzọ na Bitcoin
Ugbu a n'ahịa anyị nwere ike ịchọta ọnụ ọgụgụ dị ukwuu nke ndị ọzọ na Bitcoin pụrụ ime ihe nile, mana ka oge na-aga, ọnụọgụ a belatara nke ukwuu na-ahapụ - Eta, Litecoin na Ripple dị ka ndị ọzọ ndị ọrụ na-ejikarị. Otutu ihe ịga nke ọma nke Ether na-enwe, bụ ekele maka ọrụ Ethereum niile dị n'azụ, ebe ọ bụrụ na ọ bụ naanị ihe ọzọ, ọ gaghị enwe ike ijide otu ụzọ n'ụzọ anọ nke arụmọrụ a na-arụ na gburugburu ụwa site na cryptocurrencies. , ebe Bitcoin bụ eze na ihe fọrọ nke nta ka ọ bụrụ 50% nke ahịa.
Esi zụta Ethereum?
Ọzọ anyị ga-akọwa otu esi azụta Ethereum Ma ọ bụ kama, otu esi azụta Ethers nke bụ aha nke cryptocurrency.
Bụ asọmpi sitere na Bitcoin, iji nwee ike itinye aka na okike nke Ether anyị chọrọ kọmputa dị ike, njikọ andntanetị na ngwanrọ dị mkpa iji nwee ike ịghọ akụkụ nke netwọk ahụ na-ejikọta ya, ma si otú a malite inweta ụdị ego dijitalụ a. N'iburu n'uche na Bitcoin malitere ịrụ ọrụ na 2009, ngwa ahụ na ndụdụ dị iche iche anyị nwere ike ịchọta n'ahịa na-arụ ọrụ zuru oke, ihe anyị na-enweghị ike ikwu banyere Ethereum n'oge a.
Anyị nwekwara ike ịhọrọ ọsọ ọsọ na zụta Ethereum tinye ego a site na ọrụ dịka Coinbase, ọrụ na-enyekwa anyị ohere ịchekwa cryptocurrencies anyị n'enweghị nsogbu.
Gịnị bụ ngọngọ?
Iji kọwaa uru ndị Ethereum na-enye anyị, anyị ga-ekwu maka blockchain, usoro nkwekọrịta iji jikwaa ndekọ na arụmọrụ niile ejiri Ether rụọ, otu protocol ji Bitcoins ma nke ha nyere nnukwu ọrụ dị mkpa nke na-enye nchekwa.
Blockchain bụ ndekọ ebe a na-echekwa ozi niile metụtara cryptocurrencies. Ihe mkpuchi ọ bụla na-eji ndekọ dị iche. Ihe ndekọ a enweghị ike idezi ma ọ bụ gbanwee n'oge ọ bụla ọ na-ahụkwa mmadụ niile anya, ka onye ọ bụla nwee ike ịnweta ya. Nchedo megide mgbanwe nke ngọngọ na-enye anyị bụ omume ọma ya ebe ọ bụ na enwere ike iji ha mepụta Smart Smart.
N'ihi Ethereum ị nwere ike ịme nkwekọrịta ahụ ọ bụrụ na ọnọdụ edepụtara edee, ha ga-emezu ma ọ bụrụ na ọ bụ ma ọ bụ na-akpaghị aka na-enweghị onye nke atọ na-enwerịrị ike ịga n'ihu. Enwere ike ịhọrọ ihe ndozi maka ọnọdụ a ga-enweta site na isi mmalite nke ndị abụọ ahụ. Bankinglọ akụ na-echekwa ego bụ otu n'ime ihe kachasị nwee mmasị ịnwe ụdị nkwekọrịta a iji wepụta nkwekọrịta nkwụnye ego na ndị ọzọ na ndị ahịa, ebe ọ ga-ezere njehie ụmụ mmadụ nwere ike ime na mgbakwunye na ikwe ka ọrụ kwụ ọtọ.
Were ya na ị nwere pọtụfoliyo nke nchekwa nke ị kwadoro ọnọdụ na ọ bụrụ na ọnụahịa nke otu nchedo ruru ọnụ ọgụgụ X ha na-ere na akpaghị aka. Na nkwekọrịta nkwekọrịta Ethereum ọ dịghị onye ga-etinye aka, Onweghi onye kwesiri ịma maka ọnụahịa mgbe niile iji gaba ire ere mgbe ha ruru ọnụahịa.
Ọ bụ ezie na ihe niile dị mma ma mara mma nke ukwuu, a ghaghị iburu n'uche na ụdị nkwekọrịta a enweghị ike gbanwee, yabụ ozugbo etinye ya na ndekọ naanị ma ọ bụrụ na ị nwere ike ịkagbu ma ọ bụrụ na ọnọdụ e setịpụrụ na-enye ya ohere. Enweghi ike gbanwee okwu nke nkwekọrịta ahụ, ebe ọ bụ na dịka m kwuru, blockchain bụ ndekọ na-enweghị ike dezie ma ọ bụ gbanwee n'oge ọ bụla.
Enwere afụ cryptocurrency?
Dị ka ụdị akụ ọ bụla ọzọ, cryptocurrencies nwere ike ibupụta na egosipụta nke na-eme ka ọnụahịa ha karịa nke ha bara. N'ihe banyere cryptocurrencies, ịchọpụta afụ nwere ike ịbụ ọrụ dị mgbagwoju anya karịa ụdị akụ ndị ọzọ kemgbe ọ fọrọ nke nta ka ọ bụrụ na ọ gaghị ekwe omume ịchọpụta ezigbo uru nke ihe dị ka ethereal dị ka mkpuchi nwere ike ịbụ. Uru nke Ether bụ iwu nke ọkọnọ na mkpa, ka ndị mmadụ na-azụta Ether, ka ọnụ ahịa ya na-arị elu na nke ọzọ, nke nwere ike ime ka ọnụahịa dị ugbu a nwee mmetụta siri ike site na ndị na-eche echiche na-azụ ma na-ere cryptocurrencies na-eche naanị kọwaa ọnụahịa ya. Otu uru nke Ether nwere na Bitcoin bụ na ego ya anaghị ejedebe na nkeji iri abụọ na otu mana na a na-ewepụta nde iri na asatọ kwa afọ nke ga - enyere aka igbochi onu oriri na uru.
N'agbanyeghị nke ahụ, o siri ike ịmata ma ànyị na-eche ihu n'eziokwu ka ọ bụ na anyị anaghị eche, ebe ụfọdụ ndị ọkachamara na-eche nke ahụ na 5-10 afọ ọnụahịa nke Ether nwere ike ịdị elu karịa 100 ugboro ugbu a nke ga-egosi na ọ ka nwere njem dị elu.
Ọ bụrụ na Ethereum kwenyesiri ike na ị chọrọ ịbụ akụkụ nke cryptocurrency a, ebe a ị nwere ike ịzụta thersmụnna. You ka gbaa ume zụta Ethereum?
Pathzọ zuru ezu na edemede: Akụkọ akụrụngwa » Technology » Ethereum Kedu ihe ọ bụ na otu esi azụta ndị ọzọ?
Ọ dị ezigbo mma,
Ethereum! Kedu nnukwu ego, na-amasị m maka ndị nchekwa ma ọ bụ nwekwuo amụma nke usoro okike cryptocurrency
Azụtala m ETHs m 🙂
Enwere m mmasị itinye ego na Ethereum. Ego ole bụ opekata mpe itinye ego yana kedu ka m ga-esi nwetaghachi ego ahụ?
Ekele F. Villarreal
Zaghachi Francisco Villarreal Guijo
Enwere m mmasị itinye ego na Ethereum. Kedu ego kacha nta iji zụta ethereum na otu esi nwetaghachi ego ahụ.